မန္တလေးက အမှိုက်ပုံလမ်း ခေါ် ၃၂ လမ်း (၆၀ x ၆၂ ကြား) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မန္တလေးက အမှိုက်ပုံလမ်း ခေါ် ၃၂ လမ်း (၆၀ x ၆၂ ကြား)
မန္တလေးက အမှိုက်ပုံလမ်း ခေါ် ၃၂ လမ်း (၆၀ x ၆၂ ကြား)
Posted by mgwalone on May 29, 2012 in Myanma News | 11 comments
အမှိုက်ပုံလမ်းပေါ်က နောက်တစ်နေရာ (တောင်ဖက်ခြမ်း)
အမှိုက်ပုံနဲ့ မျက်စောင်းထိုး လမ်းတစ်ဖက်က အခြေအနေ
မန္တလေးက အမှိုက်ပုံလမ်း ခေါ် ၃၂ လမ်း (၆၀ x ၆၂ ကြား) ကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓတ်ပုံတွေပါ။ ယခင် လမ်းမကြီးတစ်ခုလောက် မကျယ်ခင်ကလည်း အမှိုက်တွေပုံထားလို့ အမှိုက်ပုံလမ်းလို့ လူသိများခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ လမ်းကိုလည်း ချဲ့ လိုက်တယ်။ အဆောက်အဦး အသစ်၊ အိမ်ယာအသစ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှိုက်ပုံကတော့ ရှိနေတုံးပါပဲ။
စည်ပင်ကလည်း မှန်မှန်လာမသိမ်းပါဘူး။ အယင်က အမှိုက်ကန် ထားပေးတယ်။ အခု ကန်လည်း မရှိတော့ ပါဘူး။ လူတွေကလည်း စည်းကမ်းမရှိကြဘူး။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်း ထင်သလို ပစ်ကြတယ်။ လမ်း ၆၀ ကနေ ၆၂ လမ်းအထိ ကြားတဲမှာ နေရာအတော်များများက အမှိုက်ပုံဖြစ်နေတယ်။ အနံ့အသက်က မကောင်း။ မိုးရွာယင် ပိုဆိုးသေးတယ်။ စည်ပင်က အမှိုက်ကား လာသိမ်းတယ် ။ အမှိုက်ပုံ အကြီးဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ နေရာက အမှိုက်ကို ရသလောက် (တစ်ခါတစ်ရံ ကားဆန့်သလောက်ပဲ) လာသိမ်းတယ်။ ကျန်တဲ့နေရာက အမှိုက်တွေကို သိမ်းဖို့ လုံးဝ မစဉ်းစား။ ဒါတွေက လူထုကို အနှောင့်ယှက် ဖြစ်နေပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ် မရှိဘူး။ ပြောရင် ပြောတဲ့နေရာပဲ လုပ်တယ်။ စည်ပင်ကလည်း ကောင်းကောင်းမလုပ်။ လူတွေကလည်း စည်းကမ်းမရှိဆိုတော့ ….။
ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမန္တလေးမှာ အများကြိး ရှိနေပါတယ် ။ လမ်းတစ်ခုလုံး မဟုတ်တောင် အချို့  လမ်းထောင့်တွေမှာ မြင်မကောင်းအောင်ပါ။
နှာခေါင်းပိတ်ပြီး လို့ဆိုလိုတာပါ။ အနံ့ အသက်မကောင်းလို့။ ပုံတွေက သေးပြန်ပြီ။ Full size နဲ့ တင်လိုက်တာကိုသေးသွားတာ။
ရန်ကုန်မှာလည်း ရှိပါတယ် အဲ့ဒီလို လမ်းမျိုး ။
ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေ အသိဥာဏ်ရှိပုံနဲ့ စည်းကမ်းရှိပုံများ … ဓါတ်ပုံရိုက်တင်ရမှာတောင် အားနာသလိုလိုတောင်ဖြစ်မိလို့ …. ။ မတင်တာ … ။
အမှိုက်ဆိုတာမျိုးကလည်း အိမ်မှာ ကြာရှည်စွာသိမ်းထားချင်တဲ့လူ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးလေ ။ နောက်ပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ်သွားစွန့်ရအောင်ကလည်း စည်ပင်ကလုပ်ထားပေးတဲ့ အမှိုက်ပုံရန်နေရာမျိုးက တစ်ရပ်ကွက်တောင် တစ်ခုမရှိဘူး ။ဒါ့ပြင် အမှိုက်သိမ်းစနစ်တွေအခုနောက်ပိုင်းပြန်လုပ်လာပေမယ့် .. အချိန်မမှန်တာကတကြောင်း ၊ အလုပ်တက်နေရသူများပြီး အမှိုက်လာသိမ်းတဲ့အချိန် မပစ်နိုင်တာကတကြောင်းနဲ့ ဒီမအမှိုက်ကိစ္စခေါင်းခဲရတော့တာပေါ့ ။ ဒီတော့လည်း တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စက လမ်းဘေးပစ်ရင်း … လိုက်ပစ်တဲ့လူများလာပြီး အမှိုက်ပုံကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့လေ .. ။
လူဆိုတာကလည်း ခက်သားလားနော် … မလုပ်နဲ့ဟေ့ဆိုတာကိုမှ လုပ်ချင်တယ် ..ဒါကလည်း လူ့ဘ၀လို့ခေါ်ရမလားပဲ … အမှိုက်မပစ်စေချင်လို့ အဲ့ဒီနေရာသန့်ရှင်းရေးလုပ်သိမ်းသွား . … ပြီးရင် လူလစ်လျှင် လာပစ်တာပဲ … ။ ကြည့်မြင်တိုင်ထီးတန်းလမ်းမနဲ့ ပန်းလှိုင်လမ်းဒေါင့်မှာ အမှိုက်ပုံကြီးရှိတယ် .. ညနေခြောက်နာရီကနေ ရှစ်နာရီထိသာ အမှိုက်ပစ်ခွင့်ရှိတယ် … အဲ့ဒီအမှိုက်ပုံနဲ့ လူနေအိမ်တွေ နီးကပ်လွန်းလို့ .. အစဉ်အဆက်အမှိုက်ပစ်တဲ့အ လေ့ကို ဖျောက်ဖို့ စည်ပင်က ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ညတိုင်း လာကျုံးရှာတယ် … နောက်နေ့ပြန်လာလည်း အမှိုက်က … တစ်ပုံကြီးပြန်ဖြစ်နေတာပဲ … ။ ဒီတော့ရာ အမှိုက်ပုံအမှိုက်ပြန်မပြစ်ဖို့ စည်ပင်ကလူတွေအမှိုက်သိမ်းပြီးတာတောင် … ညစောင့်အိပ်ရပါတယ် ။ တစ်ည နှစ်ညကနေ တပတ်လောက်ထိတော့ လူစောင့်အိပ်လို့ အမှိုက်ပစ်တဲ့ လူမရှိတော့ပါဘူး … တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ စိတ်ချရပြီအမှတ်နဲ့ လူမစောင့်အိပ်တဲ့အခါ နောက်နေ့ ပြန်တွေ့တော့ အမှိုက်ပုံကြီး ပြန်ဖြစ်နေပြန်ရော … ကိုင်း ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမလဲနော် … ။ အမှိုက်ပုံသိမ်းတော့ ဘယ်မှာ ပစ်ရမလဲ မသိတဲ့ လူတွေကို အပြစ်တင်ရမလား ၊ အမှိုက်ပုံသိမ်းပြီး … ဘယ်လို အမှိုက်သိမ်းမယ့်စနစ်မျိုးမတွေးတဲ့ လူတွေကို အပြစ်တင်ရမလား ..၊ အမှိုက်သိမ်းချိန်အဆင်ပြေအောင် မစီစဉ်ပေးတဲ့ လူတွေကို အပြစ်တင်ရမလား …. . မြင်မိတိုင်းမနေနိုင် ၊ လျှာဝင်ရှည်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား မဝေခွဲတတ်တော့ဘူးပဲ
ပြောမယ့်သာပြောတာ … ကိုယ့်လူတွေအကြောင်းလည်း သိပါ့နော် … ။
အမှိုက်ပုံးလေးများ အစဉ်သင့်လမ်းမှာ ချထားပေးလျှင် ကော်ဈေးနဲ့ ဖြတ်ပြီးရောင်းစားမယ့်လူတွေ ရှိနေဦးမှာ … အမှိုက်ပုံကိစ္စကတော့ သံသရာကိုလည်နေတော့မှာပါပဲ … ။ :D
မန်းလေးက လမ်းကြိုလမ်းကြားမှာ ဒီလိုနေရာလေးတွေအများကြီး
တာဝန်မသိတဲ့သူရယ် တာဝန်မကျေပွန်တဲ့သူရယ်ပေါင်းလိုက်တော့ အမိူက်ပုံဖြစ်လာတာပေါ့
စည်ပင်မှာတာဝန်ရှိသလို လူတဦးချင်းစီမှာ စည်းကမ်းမရှိအမှိုက်ပစ်ရင် ရှက်စရာ ဆိုတဲ.အသိမျိုးရှိဖို. လိုနေပါတယ်။ ဒီမှာက လမ်းပေါ်မှာ ဘာမှမဖြစ်သလို အမှိုက်ပစ်နေတဲ.လူတွေ % အများကြီးရှိသေးတယ်။ ကားပေါ်ကကွမ်းထွေးချတာ၊ အမှိုက်ပစ်ချတာတွေ နေ.စဉ်တွေ.နေရတာပဲ။ ကွမ်းထွေးရင် ဖမ်းမယ်.ရဲကလဲ ပါးစပ်မှာကွမ်းနဲ.။ ကဲ….
ပိုအံ့သြစရာ ကိတ်စ တစ်ခု ရှိသေးတယ် ။ အဲဒီ့အမှိုက်ပုံနေရာကြီးဟာ ညနေ နေစောင်းလို့ ၊ မှောင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ၊ အေးတင် အူးရင် အဖြစ် ပြောင်းသွားတာပါဘဲ ။
အဲ့လာကြောင့် မနှစ်က မန်းလေး လာလည်တုန်းက အဲ့နားမှာ
အူးဗိုက်နဲ့ အူးပေတို့ နှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်သလားလို့…
မြန်မာတစ်ယောက်တစ်ပုလင်းနဲ့ ကျနော်တောင် ကပ်သောက်
သွားသေးဒယ်လေ… :D :D
အေးတင် အူးရင် ဖြစ်တွားရင် အခြေအနေမကောင်းရင် ပန်းသီးလာတက်
ပုတ်သင်ညို.. ပုတ်သင်ညို အပျိုလိုရင် ခေါင်းညှိမ့်…
အူးနီဆက်ကြီး အလကားပေးထားတဲ့ ဟာတွေ ကို အဲ့နားသွားရောင်းရင်တော့ ၊ ဘောစိ မဖြစ်တောင် ၊ နေ့ တွက်လောက်တော့ စီလောက်တယ်။ အဟက်
ကျနော် တောင်ကြီးရောက်တော့ တောင်ကြီးစည်ပင် အလုပ်လုပ်ပုံနည်းနည်းအမှတ်ပေးမိတယ်
ဗျ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မနက်မိုးမလင်းခင်ကဘဲ တောင်ကြီးတမြို့ လုံးအမှိုက်စင်အောင် သိမ်းဆည်း
တာဝန်ရှိသူများ တာဝန်ကျေစွာ ဆောက်ရွက်ဖို့ လိုသလို အမှိုက်ပစ်သူများ (ပြည်သူလူထု) ကိုလည်း အသိပညာ ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက လူတိုင်း awareness ရှိကြဖို့ပါ။ အသိတရား၊ နားလည်မှု။ တာဝန်ကျေမှု စတာတွေ အားလုံးလိုနေတာပါ။ ပြောရရင်တော့ အမှိုက်ပုံ အကြောင်းက သံသရာ လည်နေသလို တရားခံရှာရင်လည်း ဂျားအေး သူ့အမေ ရိုက်သလိုပါပဲ။